Otu Steam iji mee ka ha niile riri ahụ. | Site na Linux
Otu Steam iji mee ka ha niile riri ahụ.
nano | | GNU / Linux, Egwuregwu
Mgbanaka iji chịkwaa gonads m niile… Steam iji mee ka ha niile bụrụ ihe riri ahụ bụ ihe ekwesịrị ikwu taa.
Ma ugbu a bụ na ihe ọchị na-abịa, ndị nwem, n'ihi na Valve anaghị akwụsị ikwu banyere Linux.
Achọghị m ka m jegharia nyochaa ihe niile n'ihi na m na-eche ihe nwere ụtọ na ezigbo oseose iji bụrụ isi nri na akụkụ ndị ọzọ.
Ntinye bụ, nke onye ọ bụla maaraworị: Serious Sam 3 na-abịa Linux, enen na recontra ekwenyela site Ebe nchekwa y Devolver Digital, onye kwuru n'ezie na ha agaghị eburu naanị egwuregwu ahụ kama ọ ga-agbakwunye ọdịnaya niile, na-asị: «n'ihi na penguins hụkwara ịfụ ihe ike"na n'ezie:"Anyị na-aga usoro Steamworks onboarding na rụzuru na ihe niile, mana anyị enweghị ike idobe penguuin fucking."Nso ima 😀
Agba nke abụọ nke ntinye ahụ ga - eme gị agụụ mmekọ karịa n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aphrodisiac ịgụ nkwupụta nke Gabe Newell na-ezo aka Windows 8 ugbua Linux. Gabe na-agwa Windows 8 okwu dị ka «ọdachi"Kedu n'ụzọ ga-enyerịrị ndị mmepe ya niile eze n'ihi na ọmarịcha ihe a na-akpọ ụzọ ụgbọ oloko bụ, enweghị mgbagha, mgbacha na bọọlụ jupụtara na agba mara mma. Ọ bụ ihe ijuanya na Microsoft na sistemụ ya bụ ihe a na-ekwu na Steam na-abịa Linux ma na-enye ya nke ahụ nwere ike ịchọrọ. Anaghị m ekwu ya, mba, ọ na - ekwu Maazị Gabe:
Nnukwu nsogbu na-ejide Linux bụ egwuregwu. Ndị mmadụ amaghị etu egwuregwu dị mkpa si na-akpa agwa ịzụ ndị ahịa.
Anyi choro ka odiri nfe ike ghari igba oso Steam abuo na Linux. Ọ bụ atụmatụ mkpuchi. Echere m na Windows 2.500 bụ ọdachi nye onye ọ bụla nọ na PC PC. Echere m na anyị ga-efunahụ ụfọdụ ndị isi OEM, ndị ga-apụ n'ahịa ahụ. Echere m na otu ìgwè ga-ebibi akụkụ dị n'akụkụ ya. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, mgbe ahụ ọ ga-adị mma ịnweta ụzọ ọzọ iji chebe onwe gị pụọ na ọdachi a.
Enwere m ike ịkatọ ya na ọ ga - ekwe omume na ọ na - eji nke a dị ka atụmatụ ahịa, ọ gaghị eju m anya, mana mgbe ọ bụla ọ na - ekwu okwu ọjọọ banyere windo ahụ, ọ zụrụ m (ọ na - iberibe, XD).
Ha eriworị nri niile, ugbu a bụ isi ihe ...
Steam na-abịa Linux na izu 2, drinkụọ mmiri iji gafere ụta, abụghị m ihe kpatara ejiri mebie ...
Ma ọ bụrụ na ị chọghị ikwere m mgbe ahụ jụọ Onyenwe anyị Michael Larabell, na obere German ọkachamara na Linux teknụzụ ndị dị otú ahụ a enyi nke Valve na onye nwere ezi uba iji nwalee pre pre pre pre pre (ọtụtụ pre) ewu nke Steam maka Linux n'ihu anyị.
N'ihi ya, ezughị iji egwuregwu abụọ ekwenyela ma gwa ha na ha chọrọ ịrịgo ya 2500 egwuregwu dị ugbu a na Steam na Linux. O zughi ezu ka ha kwuo okwu jọrọ njọ banyere obere windo ma ọ bụ kwuo na Linux bụ azụmahịa ọzọ nwere ike ire, kamakwa, na mgbakwunye n'ị toụ iyi, ha na-agwa anyị na ha ga-enye anyị ya n'ime izu 2! ... karịrị akarị maka obere obi m, oge nke anọ amalitela Linux gamer era amalitela, goodbye Zauron windo nkebi iji kpọọ; anyị nọ nzọụkwụ ole na ole ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu Steam iji mee ka ha niile riri ahụ.
akpọghị aha dijo
akpali, M na-eche ma ọ bụrụ na ị nwere ike igwu ihe na free ọkwọ ụgbọala nouveau
Zaghachi na-abụghị aha
Echere m ma ndị ọrụ Linux ga-etinye aka ha n'akpa ha ịzụta ihe n'ihi na ha chọrọ ihe niile n'efu
Zaghachi ka koko
Ha Ha, kedu ihe ọchị okwu gị na-enye m koko, rịba ama na ndị ọrụ Windows niile m maara chọrọ ya ma nwee ihe niile enyere (izu ohi), paireti windos, paireti ọrụ, paireti egwuregwu….
You maara na ọnụ ọgụgụ na-egosi na, n'ụzọ dị ịtụnanya, ndị na-akwụ ụgwọ kachasị maka ngwanrọ bụ ndị ọrụ Opensource? xD
Nwere ihe niile? ndo nwanne, na anyị na-eji nkesa n'efu na n'efu (ọnụ ọgụgụ ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime anyị) apụtaghị na anyị chọrọ ka enyere ihe niile
Isi m agbanweela kemgbe m kwagara gnu / Linux
Tupu mgbe m bụ onye na-eji winbugs, ọ dịtụghị mgbe ọ bụla m zụtara egwuregwu n'ihi na enweghị m mmasị n'ọrụ ọ chọrọ
Ugbu a ekele maka otu m si akụziri onwe m ihe na-emeghe ma na-adụghị nro sọftụwia m bara uru, yana agbanyeghị na m na-ahọrọkarị n'efu, ọ bụrụ na ị na-enye m ihe zuru oke m nwere ike ịkwụ ụgwọ ya n'egbughị oge
Na gnu / Linux ọ nweghị egwuregwu azụmahịa ugbu a, valvụ ghọtara na site na itinye onwe ya na gnu system, ọ ga - enwe 99% nke ndị ọrụ gnu na - azụta egwuregwu ya
Windows, echere m na naanị 40% kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka egwuregwu ha
ndị nke gnu / Linux, ikekwe ihe niile anyị na-akwụ
N'ezie, ana m akwụ ụgwọ ugbu a maka egwuregwu m na steam na na anaghị m egwu egwu n'ihi na m na-ejikarị linux ...
N'ezie, ka anyị lee ma ị ga - ahụ ụlọ ọrụ Windows na - akwụ ụgwọ maka ọfịs ... mana ị dị njikere!
Ike ọgwụgwụ dijo
obere enyi ... A GA M EGO NA EGO !!!!! Enweghị m pc bara uru… mana m ga-azụta ihe n’ime ọnwa abụọ… tupu nke a aga m enwe egwuregwu m TUPU! 🙂
Zaghachi na Los Vigueras
Edemede mara mma, Nano. Ọ na-enyefe mmasị nke ọtụtụ na-eche. Ekele m.
Echere m n'ezie na ọ bụ ihe mbụ maka ndị nrụpụta ngwaike iji malite ịhapụ ezigbo ndị ọkwọ ụgbọala Linux. Anyị ga-echere izu abụọ ma ọ bụrụ na obi ụtọ dị ukwuu bụ eziokwu. Banyere.
Zaghachi ka raerpo
Intel emeela. Na esemokwu bụ mmeghe OpenGL nke ndị ọkwọ ụgbọala niile na-akwụghị ụgwọ, gụnyere na Mesa. Ọ dabara na Valve na-arụ ọrụ iji melite Mesa, ọkachasị na arụmọrụ.
Ugh, eziokwu bu na enwere otutu ochicho, nka bu otu n’ime ihe kpatara m ji edobe Windows na pc m ma echere m na otutu ndi oru. Ihe kachasị amasị m bụ na ọ bụ ikpo okwu nke ga-eme ka ọtụtụ ndị na-eri egwuregwu vidio (ma ọ bụ ndị mmepe) bịarukwuo nso na Linux.
Ka anyị hụ ka nke a si mechie! 😀
Echere m na ọ bụ ohere dị ukwuu maka ụwa Linux. enwere ike (ma hapụ m ka m chee echiche), anyị nwere ike ị nweta ọkwọ ụgbọala ka mma na ọkwa eserese maka onwe anyị.
Roberto Gea dijo
Enwere m olileanya na n'ọdịnihu, nke a ga-eweta mmemme atụmatụ CAD, dị ka Autodesk, Solidworks, wdg.
Zaghachi Roberto Gea
Pus si na ihe m na-agụ na phoronix banyere valvụ ha na-ama rịdata na-arụ ọrụ na ndị Intel na e melite intel ọkwọ ụgbọala o doro anya na ha emechi ụfọdụ mkpa chinchi na mma arụmọrụ site 7% na Sandy Bridge 🙂
Egwuregwu ndị a nwere ike na-agba ọsọ na distros ndị ọzọ karịa ubuntu?
Zaghachi Jamin Samuel
Ọfọn, ọ bụrụ na ọ na-agba na Ubuntu, o kwesiri ka ọ na-agba ọsọ na distro ọ bụla. Emebeghi ya maka Ubuntu, a ghachi ya maka Ubuntu. Ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya ịkọwa
Site na ihe valvụ na-ekwu, ha nwere mmasị n'iwebata steam na egwuregwu na nkesa niile ha nwere ike
Ha na-arụ ọrụ na Ubuntu n'ihi na ha chọrọ usoro mmepe siri ike yana n'ihi na ha doro anya na ha chọrọ inyere Ubuntu aka ito na otuto ụwa
Cheedị echiche, MGBE MBIR NKE GNU / LINUX NKE STLAM! UBUNTU! xD chan chaan ahahaj
Welite aka gị ma ọ bụrụ na ị na-eche Ubuntu (Shuttelworth, Canonical & Associates) kwesịrị ikele maka ihe a niile na-eme!
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ okwu mkparịta ụka, mana nke a abụghị n'ihi Canonical ma ọ bụ onye ọ bụla ọkachasị. N'ezie ọ bụghị ọbụna nweta dị ka ndị dị otu a, ọ bụ naanị mbata nke ọrụ ọhụụ na Linux.
O buru na onye obula ekwesiri inye ekele, obu onye ara ahu kwuru GNU / LINUX! na ụdị valvụ
Otú ha si hie ụzọ, ha bi na taapu, o doro anya na ha amaghị ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka Shuttleworth, Canonical na Ubuntu Valve agaraghị ele GNU / Linux anya dị ka ohere azụmaahịa enwere ike.
N'ezie, Steam na-abịakwute UBUNTU, ọ bụghị GNU / Linux kwa se, na mgbe e mesịrị, ndị dị iche iche distros na-anwa ịmegharị mmepe ahụ bụ ihe ọzọ.
Ihe ọzọ bụ: Ubuntu taa bụ _UNICA_ distro nwere oke na amụma azụmahịa, nke ọzọ distros nwere ezi uche karịa ọtụtụ afọ gara aga mana ha ka bụ NICHES maka ụfọdụ, Ubuntu bụ naanị oke oke distro, yana amụma na nke ahụ dị n'egbugbere ọnụ nke ndị niile nọ na mpụga IT ụwa.
Lee ihe obi ụtọ !! anyị ga-egwu Steam n'oge na-adịghị anya, nke ahụ bụ ezigbo akụkọ !! Iwu Linux na ọdịnihu na ugbu a
Redirịba ozi ọma! A-akpali nnọọ mmasị ohere iji kwalite ụwa nke Linuxeros!
Egwuregwu vidio ahụ dị ezigbo mma 😀
Achọghị m ka ọ bụrụ m ga - etinye akara ojii na okwu ahụ, mana ekwenyeghị m. Na njedebe ọ nwere ike ịbụ iwe maka Micro $ oft iji nye ha ego ma ha na-enwetaghachi. O meela tupu: nke mbụ, ha na-ekwu banyere Windows ma kwuo na ha ga-echefu akụkụ ahụ, mgbe ahụ M $ gafere ha ego (n'ụdị ọ bụla) ma ha alaghachi. Ruo mgbe m hụrụ ihe n’ụlọ ahịa, ekwetaghị m ihe ọ bụla.
Achọrọ m ịnọgide na-enwe obi abụọ. Olileanya na m na-ezighị ezi.
Ọ ga-abụ ihe ọchị ma ọ bụrụ na, mgbe ị na-achọ inye ha ego, ha ga-aza MS: "Ọfọn, kpebie: nkwado maka ha abụọ, ma ọ bụ naanị Linux." Ma nọrọ jụụ xD
Mkpebi dị oke mma na uzuoku, mgbe ị na-enyocha nyiwe ndị ọzọ, ọ na-enye ha ohere nnwere onwe pụọ na windo ma na-eyi ndị ọzọ egwu ka ha wee ghara imechi ụlọ ọrụ ahụ n'otu ahịa. N'afọ a, e nwere nnukwu mkpọtụ na akụkụ nke ihe ngosi nke Linux (linus na nvidia, asịrị uzuoku, okwu gabbe ...) ọ na-adọrọ mmasị 😉
Edere m na mmụmụ ọnụ ọchị site na ntị rue na ntị ... ọ bụrụ na nke a dị ka ha na-ekwu, n'ikpeazụ ndị nrụpụta ga-enwe ike itinye Linuxeros na isiokwu ahụ ... anyị ga-emesị nwee ndị ọkwọ ụgbọ ala dịka Chineke zubere ...
Ma ọ bụghị betas nke AMD ma ọ bụ Nvidia nwere, n'ihi na n'eziokwu nke ahụ bụ ụzọ ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, ọ dịkarịa ala ịrụ ọrụ ... mana ha nwere ike ịga nke ọma ...
Mara: Esi m na windo n'ihi na m na-arụ ọrụ, akpọgidela m n'obe ma XD
Achọrọ m oku nke ọrụ! maka Linux ...
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume pro evolution 12 XD
David Onyekwere dijo
dị ka Delfin ga-asị na njedebe: Apụghị SERRRRRRRR !!!!!!!
Egwuregwu Linux nke mba, pc m naanị na Ubuntu, anaghịzi ekewa ihe ọ bụla ma ọlị, naanị otu ọ ga-abụ maka Linux, damn, ekwetaghị m ya, ọ dị ka nrọ nrọ na-emezu, mana ka ha na-ekwu na ikwu n'elu, ọbụnadị ahụghị nkwenye.
Zaghachi David DR
Inwere onwe gị bụ inwe ike igwu egwu.
l si ludus l
nke nnwere onwe
Zụta ma ree dijo
M tinye votu na oku nke iwu maka debian 😀
Zaghachi Zụrụ ma Ree
N'otu aka, ọ dị m ka nnukwu akụkọ, ebe ọ bụ na GNU / Linux ga-enwe egwuregwu dị mma, ihe na-emenye m ụjọ bụ na ọ ka bụ ebe a na-ere ahịa n'ime ebe a na-akwụghị ụgwọ, ọ bụghị na ọ bụ stallmaniaco, mana echere m na a ga-ekewapụta ihe ndị a na-akpọ ikike nke egwuregwu na ndị ọzọ n'ụzọ dabara adaba, ọ bụghị ka a ghara iji ya, kama maka ndị na-eji ya mara na ha na-eji ngwanrọ emechiri emechi, nke ahụ bụkwa na iji nke a ụdị sọftụwia, ọ na-akwa iko maka ihe bụ echiche nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ uche m.
Zaghachi na lumeltix
Atụmatụ ndụ dijo
Kedu ihe pụtara na izu abụọ ebe ị gụrụ ya?
Site na ha na otutu uzo ozo. Ubuntiendo na MuyLinux kwa. Enweghị m njikọ njikọ aka na aka
Etu esi emechi onu ogugu n’emechighi ihe omume a